Maxay Somaliland U Aqbashay warqadii loogu safri jiray Somalia? | Warmaalnews.com
Maxay Somaliland U Aqbashay warqadii loogu safri jiray Somalia?
Xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa aqbashay Warqadda Go Home oo ay joojisay muddo ku siman sanad ka hor sida uu ku warramay wariye Khaalid Foodhaadhi oo ka tirsan telefishanka Goobjoog.
Dadka doonaya in ay tagaan Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ah ayaa baabuur u raaci jiray magaalada Garoowe si ay halkaasi diyaarad uga raacaan taas oo la wareegtay camirnaantii Madaarka Hargeysa waxaana la rumaysan yahay in taasi kalliftay ogolaanshaha warqaddan.
muda ka hor xisibiga mucaaridka ee Waddani aya bulshada lawadagay in mdadarka CIGAL uu qarka usaaran yahay inuu xidhmo
Soomaaliya ayaa iyaduna dad badan ka jeexjeexday basaboorradooda markii uu ku dhacay dal ku galka Somaliland taas oo saamayn ku yeelatay dadka u kala goosha Muqdisho iyo Hargeysa.